Nyefee Gị Martech Zone Nkeji edemede | Martech Zone
Nyefee Gị Martech Zone Nkeji edemede
Biko ajụla ma ọ bụrụ na ị nwere ike itinye isiokwu, naanị nyefere isiokwu ebe a. Enweghị m oge iji nyochaa arịrịọ.
Enwere m ngwugwu akwụ ụgwọ iji bulie iru akara gị dị:
Ọ bụrụ na ebum n’uche gị bụ njikọ azụ, biko pụọ.
Ọ ga-abụrịrị na teknụzụ metụtara ahịa. Ọ bụghị akụkọ ụlọ ọrụ, nkwalite, ma ọ bụ itinye ego
Dị: Okwu 700 ruo 2,000, kọwaa nsogbu ahụ, usoro kacha mma iji dozie nsogbu ahụ, yana nyocha ụzọ ị ga - esi nweta ya. Gụnye njikọ ebe mmadụ nwere ike ịme nzọụkwụ ọzọ - ngosi, nbudata, wdg.
Nseta ihuenyo, eserese, akara ngosi na vidiyo na-atụ aro nke ọma (opekata mpe otu).
Ntughari sitere na onye nchoputa ma obu onye ndu n’ime ulo oru a bu ezigbo aka.
A ojiji ikpe ma ọ bụ ndị ahịa akụkọ bụ incredibly ike.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ ode akwụkwọ, anyị ga - enwerịrị adreesị ozi-e ziri ezi maka onye edemede (obughi ulo oru PR) ma ha gha debanye aha ha na foto ha Gravatar ma ọ bụ foto gụnyere.
Free nweere onwe gị ịkpọ oku ịme ihe na saịtị gị maka ngosi, nbudata, wdg. Ka anyị mara.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijikọta ngwa ọrụ, mee ka anyị mara. Anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ na nkwekọrịta ozi na ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ anyị ji rụọ ọrụ Iwu-Na Software.
Anyị nweere onwe anyị idezi ọdịnaya ahụ, dezie ya, wepụ ya, melite ya, degharịa ya, ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọ bụla iji hụ na anyị nwere akwụkwọ dị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị.
MM na -egbutu DD slash YYYY
Tupu I Nyefee*
Site na itinye akwụkwọ a, ị kwenyere na ihe niile ndị a.
Anaghị m akwụ ụgwọ idowe backlinks iji kwalite ọkwa ọchụchọ
Ana m enye akwụkwọ akụkọ izizi nke ebipụtabeghị ma ọ bụ kesaa ya ebe ọzọ
Aghọtara m site na itinye ọdịnaya a na enwere ike dezie ya ma ọ bụ wepu ya n'oge ọ bụla na-enweghị ikike m
Aghọtara m na enweghị nkwa na a ga-ebipụta isiokwu ma ọ bụ usoro iheomume maka ibipụta ya
Companylọ ọrụ, Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ*
You gụnyere isiokwu ahụ?*
Edemede niile ga-abụrịrị 100% nke izizi ma agaghị edebe ya na saịtị ọ bụla. Ikwesiri itinye aha onye edemede, adreesị ozi-e, na isi.
Mba - a ga-ehichapụ arịrịọ a.
Ee - Akwụnyela m ihe niile ị rịọrọ.
Ee - mana anyi choro Douglas Karr bụrụ onye edemede
-ede akwụkwọ aha
Chepụtara Adreesị Email
Agaghị anabata akwụkwọ edemede onye na-enweghị adreesị ozi-e na-ede akwụkwọ. Enweghị mwepu.
Odee LinkedIn URL
Onye edemede Bio
Ahịrịokwu 2 ruo 4.
Igwe isi, Logos, nseta ihuenyo na/ma ọ bụ akwụkwọ
Anakwere ụdị faịlụ: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. faịlụ faịlụ: 50 MB.
Ederede ọ bụla edepụtara chọrọ ezigbo aha, adreesị ozi-e ziri ezi n'aka onye edemede, isi okwu, na akụkọ ikpe 2 na 4. Anyị nwekwara ike ịgụnye adreesị profaịlụ ọ bụla. Biko zipu ma bulite.
You nwere onyinye ma ọ bụ ịkpọ-oku?*
Ọ bụrụ na ịnye onyinye na edemede gị, ị ga-enweta nzaghachi ka mma. ịmaatụ. Jiri koodu MARTECHZONE IHE 10% gbanyụọ. Biko nye njikọ ebe njedebe.
Y’oburu n’inwe mmemme mmeko anyi nwere ike isonye, ​​o yikarịrị ka ina ebipụta ya.
Mgbe ị nọ ebe a ...
Ọ ga-amasị gị ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ anyị?